Soo dejisan WinToFlash 1.4.0000 beta Lite, Personal... – Vessoft
Soo dejisan WinToFlash
WinToFlash – software ah si ay u abuuraan flash ka drives computerka. WinToFlash kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan files rakibo oo ku socota xogta si aad u rakibto ee codsiyada ama nidaamka qalliinka ah kombiyuutarka. Software wuxuu suuragelinayaa in la isticmaalo hab sayidkiisii ​​u-socodka shaqada fududeeyey ama qaab horumarsan la muuqaalada dheeraad ah oo ka badan dadka isticmaala sare. WinToFlash ku jira qaybo gaar ah oo ku siinayaa difaac ka fayrusyada oo xannibi nidaamka qalliinka iyo adeegyada kala duwan ee laga shakiyo. WinToFlash leeyahay interface fudud oo dareen leh.
Sameeyaa sidayaal computerka
Module in la ilaaliyo adeegyada laga shakiyo
WinToFlash Software la xiriira: